Masoandro mihiratra ho an’ny kilemaina any RDC · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Mey 2009 13:33 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, 简体中文, 繁體中文, Italiano, English
Miezaka ny mitatitra matetika ny fiainan'ny kilemaina sy ny malemy ao amin'ny fienena misy azy ny mpanao gazety kôngôley sady miandraikitra ny Congoblog “Ba Leki” Atoa Cédric Kalonji, tsy noho ny fanamby atrehin'izy ireo ihany fa hanasongadinana ihany koa ny fikirizana sy ny fandraisana andraikitra ataon'izy ireo miatrika ny fahasahiranana.
Taterin'ny Congoblog tahatahaka izao ny mombamomba an'i Mariam Mapoyi, vehivavy malemy avy ao Lubanga:
Vao tsy ela akory izay tamin'ity taona ity no namoahan'ny ITNewsAfrica ny antsipirian'ny fahombiazana azon'ny vondrona vehivavy kilemaina nanangana fandraharahana misahana ny zavakanto sy asatanana, izay nantsoiny hoe Asatanana Shona.
Namorona sy nivarotra tamin'ny alalan'ny vohikalany karazan'akanjo, poketra, harona ary kanonkanona nataon-tanana ireto vehivavy ireto. Nahita fahombiazana avy hatrany tany USA, fa nahavarotra vokatra nihoatra ny 100 tamin'ny alalan'ny ebay fotsiny, ny vokatr'izy ireo izay aoka holazana fa lasan-dry zareo manontolo ny tombom-barotra avy amin'izany. Izao fahombiazana izao no ohatra mivaingana amin'ny vokatsoa azo avy amin'ny aterineto mampifandray miantana ny kaontinanta samihafa.
Manome fitaovana ho an'izay manantalenta moa ny toeram-panofanana tahaka itony mba hahafahan'izy ireny ho tafiditra tsara ao anatin'ny fiaraha-monina. Ary izany dia mba tsy hijerena azy ireo ho vesatra, mpitranga matetika, araka izay voalazan'i Ernst Mukuli, mitatitra ao amin'ny Syfia-Grands-Lacs,
Hatramin'ny taona 1970 moa dia tsy mandoa hetra ny manan-kilema any RDC. Io no mahatonga ireo kilemaina Kôngôley mitady fomba marosamihafa amin'ny fampiasana ny seza misy kodiarana fitondrany. Congoblog no mitatitra :
Ireo mirahalahy zokiny indrindra ao amin'ny tarika kôngôley manan-kilema mpihira avy ao Kinshasa Staff Benda Bilili, moa dia nifanena tamin'ny alalan'itony fampitana entana mampitohy an'i Kinshasa sy Brazzaville itony.
Nasongadin'ny bolongan-kira avy ao Marseille KoToNTeeJ moa ny votoatin-kiran'izy ireo:
Ady & Fifandirana 27 Marsa 2020
Ginea 29 Aogositra 2019